डचटाउन वेस्ट नेबरहुड एसोसिएशन • DutchtownSTL.org • डचटाउन, सेन्ट लुइस, MO
डचटाउन वेस्ट नेबरहुड एसोसिएशन (DWNA) जीवनको समग्र गुणस्तर, समुदायको भावना, र हाम्रो शहरी छिमेकमा पश्चिमी डचटाउनमा रहेको सेन्ट लुइस, मिसुरीको शहरमा अवस्थित छ।
हाम्रो प्राथमिक फोकस ग्रान्डको पश्चिममा डचटाउन छिमेकको अंश हो, जहाँसम्म तपाईं बस्नुहुने जुनसुकै भए पनि हाम्रा सभाहरूमा उपस्थित हुन सबैलाई स्वागत छ। हामीसँग सामेल हुनुहोस् — सँगै हामी हाम्रो समुदाय र हाम्रो शहर सुधार गर्न मद्दत गर्न सक्छौं!
डचटाउन वेस्ट बैठकहरू
चलिरहेको COVID-19 स्थितिको कारण, बैठकहरू स्थगित छन्। हामी बैठकहरू पुनः सुरू गर्नेछौं जब यो हाम्रा सबै छिमेकीहरू भेला गर्न सुरक्षित छ। यस बीचमा, डचटाउनमा हुने घटनाहरूमा अद्यावधिक रहनको लागि तल साइन अप गर्नुहोस्
बैठकहरू प्रत्येक महिनाको दोस्रो बुधवार, साँझ7बजे, बन्क्वेट हलमा हुन्छन् GRbic भोजनालय र घटना स्पेस, 4071 Meramec मा Keokuk Street। धेरै बैठक सुविधाहरू अपडेट एल्डरन, नेबरहुड सुधार विशेषज्ञ, नेबरहुड संपर्क अधिकारी, र अन्य स्पिकरहरू। यदि तपाइँ बैठकमा प्रस्तुत गर्न चाहानुहुन्छ भने, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्.
डचटाउन वेस्ट रिसोर्स
नागरिक सेवा ब्यूरो: (314१622) 4800२२--XNUMX०० वा ट्विटरमा @stlcsb शहर सेवाहरू अनुरोध गर्न
वार्ड २ Ne छिमेकी सुधार विशेषज्ञ क्रिश्चियन सालर: SallerC@stlouis-mo.gov वा (314१657) 1375 XNUMX-१-XNUMX।
SLMPD जिल्ला एक: (314१231) २1212१-१२२ गैर आपतकालिनहरूको लागि, 911 १११ आपतकालिनहरूको लागि
छिमेकी संपर्क अधिकारी स्टीव बुर्ले: SMBurle@slmpd.org
वार्ड २ A एल्डर्मन शेन कोहन: CohnS@stlouis-mo.gov
कृपया याद गर्नुहोस् जब तपाइँ उपद्रव गतिविधि वा उपद्रव गुणहरू रिपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ CSB वा पुलिसलाई वास्तविक ठेगानालाई सन्दर्भ गर्नुहोस् जहाँ समस्या अवस्थित छ। गतिविधि ठेगानाद्वारा रेकर्ड गरिएको छ, र ठेगाना ठीकसँग नोट गर्नाले समस्या सम्पत्तीहरूको बिरूद्ध केसहरू निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ।
अधिक डचटाउन संसाधनहरू
अधिक छिमेक र शहर संसाधनहरूको लागि, भ्रमण गर्नुहोस् डचटाउनस्टालको संसाधन पृष्ठ, जो हाम्रो समावेश गर्दछ CSB लाई गाईड गर्नुहोस्, को बारे मा जानकारी छिमेकी सुधार विशेषज्ञहरु, र सेन्ट लुइस पुलिस विभागमा कसरी सम्पर्क राख्ने.
मासिक DWNA बैठक रिमाइन्डरहरू, थप समाचारहरू, घटनाहरू, स्रोतहरू, र अधिक डचटाउन भरिका सबैका लागि तल साईन अप गर्नुहोस्।
केवल तपाईको इ-मेल ठेगाना आवश्यक पर्दछ, तर तपाईले हामीलाई प्रदान गर्ने समुदायको बारेमा बढि जान्न मद्दतको लागि अतिरिक्त वैकल्पिक जानकारी प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ।
के तपाई हामीलाई आफ्नो बारेमा अरुलाई बताउन सक्नुहुन्छ? निश्चित! धन्यबाद। केही थप क्षेत्रहरू भर्नुहोस् ताकि हामी कसलाई सेवा गर्दैछौं राम्ररी जान्दछौं। यो सबै वैकल्पिक हो।
ठेगाना रेखा 2
के तपाईं डचटाउन क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ? हो होइन
के तपाई ग्रान्डको पश्चिममा बस्नुहुन्छ? हो होइन
के तपाईं भाँडामा लिनुहुन्छ वा तपाईंको आफ्नै घर? किराया आफ्नै जवाफ नदिन मन पर्छ
तपाई कति समयदेखि डचटाउनमा बस्नुहुन्छ? दिन, महिना, वर्ष, वा जे पनि तपाइँको सबै भन्दा राम्रो अनुमानित हो।
के तपाई डचटाउनमा काम गर्नुहुन्छ वा व्यापारको मालिक हुनुहुन्छ? म डचटाउनमा काम गर्छु। डचटाउनमा मेरो एउटा व्यवसाय छ। न
तपाई कहाँ काम गर्नुहुन्छ? अनुस्मारक, यो सबै वैकल्पिक हो। तपाईले चाहानु भएको कुरा मात्र साझेदारी गर्नुहोस्।
तपाईको व्यवसायको नाम के हो?
के तपाईं डचटाउनको लागि स्वयम्सेवा गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ? हो होइन
तपाई केको लागि स्वयंसेवा गर्न चाहानुहुन्छ? हामी कुनै पनि र सबै सीपहरू स्वागत गर्दछौं।
हाम्रो पत्राचार सूचीका लागि साइन अप गर्नुहोस्
डचटाउन STL.org डचटाउन वेस्ट नेबरहुड एसोसिएशन